Kanjani ngokushesha landizela ehlobo! Yeka isihawu ukuthi ayisekho kungenzeka yokuthamela ilanga futhi ugxumela cool emfuleni noma olwandle amanzi ... Ngaphezu kwalokho, iningi iholide sipho ngo-September - lapho ukuya khona? ESpain, impendulo isobala. Lokhu libalele, elikhanyayo, izwe ekwamukeleni kuzokusa ubuhlobo obufudumele, ngoba ngo-September, ehlobo ngawo ugcwaliseka ngokugcwele lapho.
Ezindaweni ezimaphakathi yezwe izinga lokushisa udlula 30 ° C, futhi enyakatho 27 ° C. Yingakho ngo-September, woza lapha emhlabeni wonke labo izivakashi abafuna isikhathi sonyaka ehlobo.
Ekupheleni kwenyanga uthola kuthe ukuphola kancane, kwanda izimvula ungase umbelesele olwandle. Kodwa phakathi naso sonke isikhathi isimo sezulu namanje ukhululekile kakhulu. Izindleko izinkambo ku Spain iqala ukunqabela, kuba ngezansi intengo amasevisi amahhotela, Ngakho-ke, ezinye izobiza ishibhile ngalesi sikhathi.
ngisho izivakashi eziningi ebona abaqapheli yini eSpain ngo-September. Kuphi futhi lapho kangcono ukuchitha sikhathi, sizozama ukuqonda.
Ngo-September, kuhle ikakhulukazi iholide abantu abalisebenzisayo eziQhingini zaseCanary futhi Catalonia. Adume lolwandle resort of Salou iyindawo ofanele kakhulu intsha. Idume amabhishi lawo elihle kakhulu, eziningi zokuzijabulisa amapaki, ethandwa kakhulu okuyinto "Port Aventura". The yokungcebeleka kuyinto nightlife emnandi kakhulu. Ziningi zokudla, nemishayo, amathilomu, ema-disco namaqembu. Ngoba wena ukuba izinkambo ukuze yazi nge ezikhangayo bakulelo bandla bahlele izinkulumo.
Lapho ukuya eSpain ngo-September, abalandeli iholidi beach? Okokuqala zokungcebeleka isiqhingi esihle Tenerife. Lapha ungakwazi uphumule ngasiphi emabhishi ozithandayo, ngisho endaweni amahhotela zikanokusho. Inkokhelo yenziwe kumasevisi yesondlo kuphela - sokuqasha izambulela, omatilasi, emphemeni izihlalo kanye ezihlukahlukene amanzi ezikhangayo.
Ngokuvamile abantu abanentshisekelo inkampani yokulungisela abahambayo lapho ukuya eSpain ngo-September. Konke kuncike onjani iholide uthanda. Abaningi banesithakazelo ukuvakasha amazing kanye Ukuvakashela izinto emlandweni futhi yokwakha Spain. Kufanele nakanjani vakashela Barcelona ubone nezakhiwo zasendulo e Tarragona, abone umuzi Girona lasendulo, ngokugcina izikhumbuzo abanamasiko nezinkambiso ezihlukahlukene.
abazali abasha ngokuvamile uyazibuza lapho ukuya eSpain nengane encane. Cishe noma yimuphi resort kulelizwe wokungenisa izihambi efanelekayo iholidi ezinjalo. Yonke indawo ngemindeni nezingane izimo ezinkulu. Kodwa resort kangcono imindeni enezingane (ngokubona bakithi) iyona Costa Dorado. Kukhona dolphinarium langa, amanzi ipaki, izinto eziningi ezikhangayo.
Uma namanje abanesifiso sokwazi mayelana nokuthi uzoyaphi eseholidini eSpain, singakwazi bakuncome nezwe odumile zokungcebeleka - Costa Blanca, Costa de Sol, Costa Brava, Mallorca. Rest kulelizwe akusoze kwalibaleka. Abantu abaningi useSpain ukujabulela imikhosi agqamile carnivals ukuthi bayakwazi futhi uthanda ukuchitha.
"Oilman" - ehostela, Volgograd: ikheli, inombolo yocingo, ukubuyekezwa
Ukuwa kwe-3 akuqali - yini engingayenza?
Zokupheka ezithakazelisayo: kusukela imikhiqizo elula ukulungiselela ngokushesha futhi esihlwabusayo
Anaferon izingane - imiyalelo futhi usize umama wakhe ekulweni amagciwane